Qalabka Kalluumaysiga, Kalluumaysiga Rod Processing Machine, Machine Test Kalluumeysiga xilliga firaaqada - Tonglian
Leedahay koox saarka xirfadeed, la waxyaabaha cusub, tayo wanaagsan leh iyo brand fikirka adeeg cusub.
Iyadoo tayada alaabooyinka la isku halayn karo iyo sumcad adeegga daacad ah, noqday hogaamiyaha warshadaha ugu xirfadeed.
Rakibaadda: waxaan soo diri doonaa farsamo oo bilaash ah on-site rakibaadda iyo qalabka debugging iyo shaqaalaha tababarka.
Weihai warshad qalabka kalluumaysiga Tonglian, waxa uu ku yaalaa magaalada qurux xeebta - gobolka Shandong Weihai City Village Industrial Zone, takhasusay soo saarka ee kalluumaysiga, qalabka wax soo saarka golf, iyo ballaarinta guul of horumarinta tube galaas dhexroor weyn, carbon kale warshadaha qalabka wax taaj oo kale duurka mugga tube.
Large nadiifinayo biibiile dhexroor iyo mashiinka goynta
Mashiinka coring dhexroor Large
kubad u eegis mashiinka biibiile fur